Iran oo lagu eedeeyey Tijaabinta Gantaal qaadi kara bambaanada Nukliyeerka | Gaaloos.com
Home » News » Wararka » Iran oo lagu eedeeyey Tijaabinta Gantaal qaadi kara bambaanada Nukliyeerka
Iran oo lagu eedeeyey Tijaabinta Gantaal qaadi kara bambaanada Nukliyeerka
Guddiga kormeerka ee qaabilsan dalka Iran ayaa sheegay in wadanka Iran uu bishii Oktoober ee lasoo dhaafay tijaabiyey Gantaal nooca ridada dhexe ah oo awood uleh in loo isticmaalo hubka Nukliyeerka, sida lagu sheegay warbixin shalay loo gudbiyey Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Qaar kamid ah dalalka reer Galbeedka sida France iyo Britain ayaa codsaday in tilaabo laga qaado dalka Iran oo ay ku eedeeyeen inuu jabiyey xayiraadii horey loo saaray dhismaha Gantaalada ridada dheer ee lagu sameeyo wadanka Iran.
Gantaalkan loo yaqaan Emad ayaa ah mid dalka Iran soo saaro isla markaana la sheegay inuu xambaari karo bambaanada Nuliyeerka, waxaana la xaqiijiyey in tijaabadaasi ay ku guuleysteen Iraaniyiinta.
Balse Maraykanka ayaa si taxadar leh uga hadlay arrintan, walow aysan weli cadeyn in cunaqabateyn horleh la saari doono wadanka Iran oo dhawaan heshiis la xariira Barnaamijka Nukliyeerka la galay wadamada awooda kuleh Golaha Amaanka.
Heshiiskii bishii July ee dhexmaray Iran iyo shanta dal ee awooda kuleh Golaha Amaanka ayaa la xariiray hoos u dhigida barnaamijka Nukliyeerka, walow la sheegay in tijaabinta gantaalka uusan si toos ah ku jabineyn qodobada heshiiskaasi.
Title: Iran oo lagu eedeeyey Tijaabinta Gantaal qaadi kara bambaanada Nukliyeerka